Inqaku leRedmi 6 Pro kunye neRedmi Qaphela i-5 Pro ifumana iPie ezinzileyo ye-Android | I-Androidsis
Inqaku leRedmi 6 Pro kunye neRedmi Qaphela i-5 Pro ifumana uhlaziyo kwiPie ezinzileyo ye-Android
Los I-Redmi Qaphela i-6 Pro y 5 Pro, ii-smartphones ezimbini ezivela kwiXiaomi okanye, endaweni yoko, zisuka kwiRedmi, zifumana Uhlobo oluzinzileyo lwe Android Pie nge-MIUI 10 ngohlaziyo olutsha. Ngelixa eyokuqala wayesele eyamkela ukusukela kwiiveki ezimbalwa, ngoku iyafumaneka ngokufanayo kwingingqi entsha.
Zombini ezi zigaba zihamba phakathi ziye zilinde i-firmware, enika inkangeleko entsha kwaye inikezela ukuhlaziywa kwamava omsebenzisi kwaye ingcono kune-beta yale khekhe ebebeyivavanya ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, uJanuwari.
Okwangoku Uhlaziyo luyenziwa eIndiya, kodwa ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba usasazwe kweminye imimandla, ngokuthe ngcembe umahluko weeyure neentsuku ezimbalwa.
Ngomntu ngamnye, ifika njenge "MIUI 10.3.2.0.PDMMIXM" yeRedmi 6 Pro kwaye iza nepaki yokhuseleko kaMeyi. Uhlaziyo lukwabonelela ngenkxaso yokusebenzisa ukuvulwa kobuso ekutshixweni kweapp. I-VoLTE yeDual kunye neNkxaso yeMowudi emnyama nayo ibandakanyiwe kunye nokulungiswa kwe-bug ezininzi.
Ukujonga ukuba sele unayo i-firmware entsha, jonga icandelo lokuhlaziya kwifowuni efanelekileyo. Ukuba sele ikho ukukhutshelwa kunye nokufakwa, ungaqhubeka ukuqala inkqubo yokuhambisa. Ewe kunjalo, ngaphambi kokwenza njalo, njengoko sihlala sisenza, sicebisa ukuba isixhobo sixhunywe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi ezinzileyo kunye nesantya esiphezulu, ukuthintela ukusetyenziswa kakhulu kwephakheji yedatha kwaye kuthintele umngcipheko wenkqubo ukusilela.
Zombini iRedmi 6 Pro kunye neRedmi Qaphela 5 Pro zasungulwa kunyaka ophelileyo. Eyangaphambili yayisele ihlaziyiwe kwi-Android Pie ngo-Novemba kwaye ngelixa iRedmi 6 ibaleka i-Android Oreo, iRedmi Qaphela i-5 Pro isungulwe nge-Android Nougat. Bobabini bafumene uhlaziyo kwiPie yePie. Kwaye kunokwenzeka ukuba olu luhlaziyo lokugqibela lwe-OS yeRedmi Qaphela i-Pro 5. Nangona kunjalo, usafuna ukufumana uhlaziyo lwe-MIUI.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Inqaku leRedmi 6 Pro kunye neRedmi Qaphela i-5 Pro ifumana uhlaziyo kwiPie ezinzileyo ye-Android
I-Spotify izakuvumela ukuba wabelane ngomculo nabahlobo kwaye umamele ngaxeshanye